Uyongeza njani iArhente yakho njengoMdibanisi kwiVenkile yakho yoThengiso | Martech Zone
Ungaze unike iziqinisekiso zakho zokungena kwiqonga lakho kwiarhente yakho. Zininzi kakhulu izinto ezinokuthi zihambe gwenxa xa usenza oku-ukusuka kwiiphaswedi ezilahlekileyo ukufikelela kulwazi ekungafanelekanga ukuba babenalo. Uninzi lwamaqonga kule mihla aneendlela zokongeza abasebenzisi okanye abo basebenzisana nabo kwiqonga lakho ukuze babenomda kwaye banokususwa xa iinkonzo zigqityiwe.
Shopify iyenza kakuhle le nto ukufikelela komdibaniselwano kumaqabane. Uncedo lwabasebenzisana kukuba abadibanisi kubalo lwakho lwabasebenzisi abanelayisensi kwivenkile yakho yakwaShopify, nokuba yeyiphi.
Cwangcisa ukufikelela kwiVenkile yokuSebenza kunye noMthengisi
Ngokuzenzekelayo, nabani na unokucela ukufikelela ekubeni ngumdibanisi kwindawo yakho yeShopify. Nantsi indlela yokujonga useto lwakho.
Jonga ku izicwangciso.
Jonga ku Abasebenzisi kunye neemvume.
Apha uya kufumana ifayile ye- Abasebenza kunye icandelo. Isimo esingagqibekanga kukuba nabani na angathumela isicelo somdibaniselwano. Ukuba ungathanda ukukhawulela ukuba ngubani ocela ukufikelela kubambiswano, unokuseta ikhowudi yesicelo njengokhetho.
Yiyo yonke into ekhoyo kuyo! Ivenkile yakho yakwaShopify isetiwe ukuze ifumane izicelo zomdibaniselwano kwiarhente yakho enokuthi isebenze kumxholo, imixholo, ubeko, ulwazi ngemveliso, okanye ukudityaniswa.
Iarhente yakho kufuneka isetelwe njenge Ivenkile yeQabane kwaye emva koko bacela ukufikelela kumdibanisi ngokufaka i-URL yakho yakwaShopify (yangaphakathi) yokugcina kunye nazo zonke iimvume abazifunayo:
Nje ukuba iarhente yakho ithumele isicelo sokusebenzisana, uya kufumana i-imeyile apho unokujonga khona kwaye ubanikeze iimvume. Nje ukuba uvume ukufikelela kwivenkile, banokufika emsebenzini!
tags: ukufikelela kwiarhenteumncedisiiinkcukachathengaIvenkile yokusebenzisanaThenga iqabaneThenga amaqabaneIvenkile yomsebenzisiIvenkile mvume zomsebenzisiIvenkile abasebenzisiiimvume zomsebenzisi
I-WordPress: Susa kwaye uqondise kwakhona i-YYYY / MM / DD Ulwakhiwo lwePermalink kunye neRegex kunye nenqanaba leMathematics SEO